မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီးအော်သလား | ဥက္ကာကိုကို
Posted in: ဆောင်းပါး.	Tagged: အွန်လိုင်းကိစ္စ.	2 Comments
Online ယဉ်ကျေးမှု့က ပေါ်ပေါက်လာတော့ လူစုံ အရွယ်စုံပဲ Online ပေါ်ရောက်လာတာ မဆန်းပါဘူး။ Online ဘလောဂ့် တွေ မှာ ကိုယ်သန်ရာ ၊ သန်ရာ ၊ ရေးသားကြတယ်။ အဲဒီလို သန်ရာ သန်ရာ ရေးသားကြတဲ့ အခါမှာ အထူးသဖြင့်ကတော့ အနုပညာ ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေက သူတို့ လက်လှမ်းမှီတဲ့ နည်းပညာ အကူအညီနဲ့ တစ်ခြားသော Online က အနုပညာ ၀ါသနာပါသူချင်းကို ကိုယ်ဖန်တီး ထုတ်လုပ် ထားတဲ့ ပန်းချီ။ ဒီဇိုင်း၊ ကဗျာ ၊ ၀ထ္ထု စသည်ကို ဝေမျှပြီး ဖတ်ကြည့်ပါဦး သဘောမျိုးနဲ့ စာတင်ကြတာပါပဲ။ “ငါတော့ ဒါလေး လုပ်ထားတယ် မင်းဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး” ဖတ်ပြီးတဲ့ လူကလည်း ကောင်းရင် ကောင်းတယ်။ မကောင်းရင် မကောင်းဘူး။ ဝေဖန်သွားတာပါပဲ။ လူချင်းခင်မင်မှု့အရ တစ်ချို့ကလည်း ဘာရေးရေး ကောင်းတယ် ပြောတာလည်း ရှိတာပါပဲ။
အစပိုင်းမှာ ဒီလိုမျိုး သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဝေမျှပြီး ကိုယ့်ဖန်တီးမှု့တွေကို ခံစားစေရာကနေ..။ တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်နားနဲ့ အချင်းချင်း forward ပေး၊ စကားကမ်းလှမ်းချိတ်ဆက်ပြီး ဒီနယ်ပယ်က ကျယ်ဝန်းလာကြတာ အခုအချိန်ထိပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Social Networking Website ပေါင်း များစွာရှိတယ်။ ဒီထဲကမှ နာမည်ကြီး Website တွေက သုံးလေးငါးခု သာသာပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ Site တွေထဲမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်(Member) ပေါင်းကတော့ နည်းနည်းနောနောမဟုတ်ဘူး။ Site တစ်ခုကို ထောင်သောင်းချီပြီး အဖွဲ့ဝင် တွေရှိတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အခု Online လောကမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကဗျာဆရာလေးတွေက ကိုယ်ပိုင် ၀က်ဘ် ဘလောဂ့် တွေ ခေတ်မစားခင်က Web Forum တွေ မှာ အဖွဲ့ဝင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာလေးတွေ ယူပြီး ကဗျာတွေ ၊ ၀ထ္ထုတွေ ရေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ မြန်မာ့ Web Blog တွေ တစ်ခေတ်ဆန်းလာတော့ ကိုယ်ပိုင် ဘလောဂ့် တွေ ဖန်တီးပြီး ကိုယ့် ဘလောဂ့် မှာ ကိုယ်ရေးခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း နည်းပညာ သမားတွေက မြန်မာလိုရေးလို့ အဆင်ပြေအောင်လို့ မြန်မာစာလုံးတွေကို တီထွင်ပြီး ဘလောဂ့် ရေးသားခြင်းကို ပိုပိုထွန်းကားလာစေခဲ့တယ်။ အခုလောလောဆယ် Facebook ဆိုတဲ့ Socal Networking Website ပေါ်လာတော့ မြန်မာ လူငယ်အများစုက Facebook မှာ ၀င်ရောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာကို ယူပြီး စာတွေရေးသားကြပြန်တယ်။
Online မှာ ရေးသားကြတာက စုံတယ်။ ဟင်းချက်နည်းကအစ အနုပညာအလယ် နည်းပညာ အဆုံး ကြိုက်တာကို ရေးသားမျှဝေကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စည်းစည်းလုံးလုံးရှိကြတယ်။ တစ်ယောက် မသိတာကို တစ်ယောက်ကနည်းပေးလမ်းပြကြတယ်…။ သင်ပြပေးစရာရှိတာ Online ကနေပဲ သင်ပြပေးကြတယ်…။ ဒီလို Online မှာတင်မက အပြင်ကမ္ဘာမှာ တွေ့ဆုံကြတော့လည်း ချစ်ခင်မှု့တွေက ပြောလို့မကုန် ၊ ရင်းနှီးမှု့တွေက ပြောလို့မကုန်ဘူး။ ဒီလို Social Networking Websites တွေက နေ ရင်းနှီးမှု့ရ ပြီး အပြင်ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အတူတူလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေတောင် ဟောဒီ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိပါနဲ့။ ထားတော့ ဒါက စီးပွားရေးကိစ္စ။
အနုပညာကိစ္စမှာလည်း Online က ကဗျာတွေက ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကြားကြားနေရတယ်…။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အဆင့်မရှိတဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေ ၊ ၀ထ္ထုတွေ ဆိုလား။ ထားပါတော့… Online က စာပေတွေက အဆင့်မရှိတဲ့ စာပေတွေ ဆိုရင် မဂ္ဂဇင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေကရော အကုန်လုံးက အဆင့်ရှိလို့လားလို့ ပြန်မေးမယ်ဆိုရင် ပွဲဆူသွားနိုင်တယ်…။ လူငယ်တွေကို အထင်မသေးပါနဲ့။ Online မှာ ပေါတောတော စာပေရှိသလို ၊ Printed လောကမှာလည်း ပေါတောတော စာပေဆိုတာရှိတယ်။ Online မှာ အတင်းအဖျင်းတွေ ရေးတဲ့ ဘလောဂ့် တွေရှိသလို။ Printed မှာလည်း အတင်းအဖျင်းတွေကို ဖိသိပ်ထည့်ထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေ ရှိတယ်။
Online မှာ စာရေးကြတဲ့ အကျင့်ဖြစ်လာအောင်လို့ ပြင်ပ စာပေလောကက ဆရာများရဲ့ ကျေးဇူးကို လည်း မေ့လို့မရဘူးဆိုတာ Online မှာစာရေးသားနေကြတဲ့ လူငယ်အားလုံး သိတယ် နားလည်တယ်။ အဲ့…ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး အလေ့အကျင့်က ဖြစ်ပေါ်လာတာလေ..။ Online မှာတွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေတွေ ကျေးဇူးကြောင့်လည်း စာရေး စာဖတ်တဲ့ အကျင့်က ဆက်လက် တည်တံ့နေတာ ဖြစ်တယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ဆယ့်သုံးလေးနှစ် ကလေးကအစ တက်ရေးနေကြတာလေ…။
Printed Media မှာ ရေးသားနေကြတဲ့ လူတွေက စာပဲရေးကြရတာ။ Online မှာ စာရေးသားဖို့ဆိုရင် Internet သုံးနိုင်ရမယ်။ ဒါက လွယ်တယ်…ပိုက်ဆံသုံးလေးထောင်ရှိရင် သုံးတတ်သွားမယ်။ အဲ့… ခက်တာကဘာလဲ… ဘလောဂ့် ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ရမလဲ..။ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းက မေးလ်လေးသုံးတတ်ရုံ ပဲဆိုရင် ဘာမှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘလောဂ့့်  တည်ဆောက်တတ်တဲ့လူ ကို ရှာရမယ်…။ မေးရမယ်။ တစ်ချို့ ဘလောဂ့့်  လုပ်ချင်ပါလျှက် တစ်နှစ်ခွဲ နှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်..။
စာတိုက်ကနေ မဂ္ဂဇင်းကို စာပို့သလို လုပ်လို့ရရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာပဲ ပေါ့။ အခုဟာက Online ပေါ်မှာ ကိုယ့်စာလေး တစ်လုံးနှစ်လုံးတင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရတာ။ ကိုယ့် ဘလောဂ့် လာဖတ်ချင်အောင်လည်း ပြင်ဆင် ရတယ်။ သူများ ဘလောဂ့် တွေကိုလည်း နည်းနာယူရတယ်။ ကိုယ့်စာကို ကိုယ့်ဘာသာ တည်းဖြတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး တင်ကြတာ။ မဂ္ဂဇင်းကို ကဗျာပို့သလို ရောင်းကောင်းအောင် ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ ကဗျာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အနုပညာ ခံစားမှု့ကို အရိုးခံအတိုင်းတင်ပြတာ ဖတ်ချင်လည်း ဖြစ်သလို မဖတ်ချင်လည်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဗီဇက စာရေးချင်စိတ်ဖြစ်လို့ ရေးတဲ့အပေါ်မှာ နာမည်လိုချင်မှု့လည်း မရှိဘူး။ ဘယ်သူမဆို ကဗျာရေးစ စာရေးစမှာတော့ ပေါတောတော ဆိုတာ ရှိကြတာပဲ။ ဘယ်သူမှ နတ်ရေကန်ထဲက တက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလေ…။
စသည်ဖြင့် ပေါတောတောလေးတွေနဲ့ ကဗျာစရေး ခဲ့ကြတာပဲ။ ဘယ်သူမှ LP စမရေးကြသလို။ ပို့စ်မော်ဒန် ကိုလည်း စားသုံးပြီး မွေးလာကြတာမဟုတ်ဘူး။ ရေးပါများ ဖတ်ပါများလို့ စာပေပါရမီရင့်သန်လာကြမှ လက်ကောင်းလာကြတာ။ ပြင်ပစာပေသမားတွေ ပြောတဲ့ ဖြတ်သန်းမှု့ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာပါလဲ? ဆရာ့ ဆရာများကို မျက်နှာပြောင် တိုက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ အယ်ဒီတာ့ ကိုအောက်ကျို့ရတာလား။ နေပူထဲမှာ ပြတ်ခါနီး ဖိနပ်ကိုစီးပြီး စာပေတိုက်ကို သွားရတာလား။ နေ့လည်စာမစားရသေးပဲနဲ့ ကားခချွေတာပြီး မြို့ထဲသွားရတာလား။ ဒါလောက်က အေးဆေးပါ။
Online သမားတွေလည်း ရှိတယ်လေ… အင်တာနက်သုံးဖို့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ၊ ကိုယ့် ဒိုမိန်း (Domain) လေး သက်တမ်း ကုန်ခါနီးလို့ အသစ်ဝယ်ဖို့၊ Internet ဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံမလောက်လို့ မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ရလို့၊ ကိုယ့်မှာ ကွန်ပြူတာ မရှိလို့ သူငယ်ချင်းဆီမှာ ကပ်သုံးရလို့။ ကိုယ့်မှာ Laptop ရှိပါလျှက် အင်တာနက်မရှိလို့ ၀ိုင်ယာလက်စ် ရှိတဲ့ Fast Food ဆိုင်မှာသွားသုံးရလို့…စသဖြင့် အဆင်မပြေတာတွေ လျှောက်ပြောရရင် ဘ၀ကနာပြီးသားပဲ ဒရာမာကားရိုက်လို့ရတယ်။
လူငယ်တွေ ဘာလို့ Online မှာရှိတဲ့ စာမျက်နှာတွေမှာ စာရေးကြသလဲ…။ ဒါက ရှင်းပါတယ်. .. ကိုယ့်ဖန်တီးမှု့တစ်ခုကို စာဖတ်သူနဲ့ ချက်ချင်းတွေ့စေလို့ပဲပေါ့။ ကိုယ့်အပေါ်မှာ စာဖတ်သူရဲ့ သဘောထားကို ချက်ချင်း သိမြင်နိုင်လို့ပေါ့။ ဒါဆိုရင် မဂ္ဂဇင်းမှာ စာရေးတာကို မကြိုက်ကြဘူးလား? ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုက်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုဖြန့်မှာကိုး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို စာဖတ်ချင်တဲ့လူ ကို ဖတ်စေဖို့ အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ စာမျက်နှာပေါ်ရောက်ရင်လည်း ကဗျာဖတ်တဲ့ လူက ဘယ်လောက်ရှိသလဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ နဲ့ ဆို ကိုယ့်ကဗျာလေး သိမ်ငယ်လှချည်ရဲ့ ကဗျာသမား အချင်းချင်းသာ ပြန်ဖတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်က ကဗျာလေးက တော်တော်ကို သနားဖို့ကောင်းလှချည်ရဲ့။
အေဖိုးစာရွက်ဝယ် ၊ စာအိတ်ဝယ်၊ စာတိုက်သွားပြီးပို့လိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ၊ စာတစ်ပုဒ်က စာဖတ်သူလက်ထဲရောက်ဖို့ အနည်းဆုံးတော့ သုံးလလောက်ကြတယ်….။ ကြာမှာပေါ့။ အယ်ဒီတာနဲ့မှ မရင်းနှီးတာ။ ဒါလေး သုံးလိုက်ဗျာလို့ ပြောလို့မရဘူးလေ…။ ဖတ်ကြည့်ပါလို့လည်း ပြောလို့မရဘူးလေ…။ ဒါကြောင့် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာ ဖတ်သူရှိလို့ ရေးကြတယ်။ စာပေတာဝန်တွေ ဘာတာဝန်တွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောနေဖို့မလိုဘူး။ စာရေးကြတယ်ဆိုတာက စာဖတ်သူဆီကို အရောက်ပို့ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ အယ်ဒီတာရွေးမှ စာဖတ်သူတွေ စာဖတ်ရမယ် လို့ ဘယ်ဥပဒေမှ ပြဌန်းမထားပါဘူး။ Online ပါ် စာတစ်ပုဒ် တင်လိုက်တာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စာဖတ်သူဆီကတုန့်ပြန်သံကို ကြားရတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့။ Online မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့ရတော့ ကိုယ်ပြချင်တဲ့ အတိုင်း ပြလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုက်သူ ရှိသလို သောက်မြင်ကပ်တဲ့ သူလည်း ရှိတာပါပဲ။ ဒါကတော့ နေရာတိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ အကြောင်းတရားပဲ။ ပြင်ပစာပေလောကမှာတောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ခွေးနဲ့ မနှိုင်းရုံတစ်မယ်။ စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာဖတ်သူကိုတောင် အားမနာနိုင်အောင် ကိုယ့်ဂုဏ် ကိုယ်ဖော်ပြီး ဆော်နေကြသေးတာပဲ။ အဲ့ဒါက စာရေးတဲ့ ဆရာ တွေနော်…လူငယ်တွေ မဟုတ်သေးဘူး။
လူငယ်တွေ ဆိုတော့ ငယ်ဂုဏ်ရှိတယ်လေ…ငယ်ရာက ကြီးလာတယ်ဆိုရင် သိကြမှာပါ။ Online ထိရောက်မှု့ကြောင့်လည်း ပြင်ပက စာပေသမားတွေ ၊ စာရေးဆရာတွေ ဘလောဂ့်တွေ ဆောက်လာကြ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ၀င်ရေးလာကြနဲ့ ဖြစ်လာတာပဲလေ…။ Online က စာပေ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ စာပေလောက က စာရေးဆရာတွေ ဆုံစည်း မှု့တွေ ဖြစ်လာကြတာပဲ။ Online မှာ စာရေးဖော်တွေ များလာတဲ့ အခါ၊ မိတ်ဆွေတွေများလာတဲ့အခါ စုပေါင်းပြီး ပြင်ပလောကမှာ စာပေလှုပ်ရှားမှု့တွေလုပ်လာနိုင်တယ် ၊ လူမှု့ရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး လူမှု့အကျိုးပြုမှု့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်လာနိုင်တယ်။ စီးပွားရေးတစ်ဖက် ၊ နည်းပညာ နောက်လိုက်ရတာ တစ်ဖက် ၊ ကိုယ့်ဝါသနာပါရာကို လေ့လာဆည်းပူးရတာ ၊ ခံစားပျော်ဝင်ရတာ တစ်ဖက်။ အဖက်ဖက်ကနေ ဖိစီးမှု့တွေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လူငယ်ပီပီ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ဖောက်ခွဲပစ်တဲ့အခါလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Online စာပေရေးသားတဲ့ လူငယ်တွေ ဟန်မဆောင်တတ်ဘူး ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က မှားတာရှိရင် ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ဖော်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတယ်။ ရှုတ်ချကြတယ်။ ဒါချစ်စရာပဲ။
Online မှာ မကျေနပ်လို့ ဆဲရင်တောင် နာမည်ကိုဖော်ပြီး ဆဲရဲမှ သိက္ခာရှိတယ်။ ဘလောဂ့် တွေမှာ ရေးသားသူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှု့ လူကြိုက်များမှု့ကို မနာလိုလို့ စီဘောက်စ် (C-box) လို့ခေါ်တဲ့ အများစကားပြောရာနေရာမှာ စာရေးတဲ့သူ ကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ရေးပြီး ဆဲတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေက Anonymous အနေနဲ့ ဆဲချင်ဆဲ ၊ မဆဲရင် နာမည်ပြောင်တွေနဲ့ ဆဲကြတယ်။ ဒါဟာ သိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ မကျေနပ်တာပြောဖို့ နာမည်ကို ၀ှက်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု့ ရှိတယ်ဆိုရင် နာမည်ကို တပ်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုဖို့သင့်တယ်။ ပြီးတော့ နည်းပညာ တစ်ဖက် ၊ အနုပညာခံစားမှု့တစ်ဖက် နဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ Online စာရေးသားတဲ့ လူငယ်တွေကို ဝေဖန်ချင်တယ်ဆိုရင် Facebook တစ်ခုလောက်သုံးတတ်ရုံ၊ ဘလောဂ့် တစ်ခုလောက် သုံးတတ်ရုံ နဲ့ တော့ ဝေဖန်ဖို့မသင့်ဘူးလို့ပြောပါရစေ…။
အခုဆိုရင် Online က အဆင့်မရှိဘူးလို့ ပြောကြတဲ့ Ning ဆိုဒ် ကလေးတွေမှာတောင် ပြင်ပ Printed Media တွေက စာပေရေးသားသူတွေ ၀င်ရောက်ပြီး ခန့်ခန့်ထည်ထည် ရေးနိုင်နေကြပြီ။ ဒါဘာကြောင့်လဲ…လူငယ်တွေကို စာဖတ်စေချင်လို့ အများစုဖတ်မယ့်နေရာမှာ လာတင်ကြတာ။ အဓိကက ကိုယ်ချပြတဲ့ အနုပညာကို စားသုံးသူဆီ ရောက်ရှိသွားဖို့ပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆို မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာပဲနေလေ….။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
Online စာပေရေးသားတဲ့ လူငယ်တွေကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောတဲ့ ပြင်ပ စာပေသမားတွေရှိသလို နွေးနွေးထွေးထွေး လက်ကမ်းကြိုဆိုကြတဲ့ စာပေသမားတွေ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း Online မှာစာရေးကြတဲ့ လူတွေ သိကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းလေး ခဏသုံးပြီး အွန်လိုင်းက လူတစ်ယောက် နှစ်ယောက်နဲ့ မတည့်တာနဲ့ပဲ။ Online စာပေ လောကကို လူတွေအထင်သေးမလားလို့ ဖွမယ်ဆိုရင်တော့… အချည်းနှီးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုရေးပြီး ဖွမယ့်အစား ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက်သာ သောက်ပြီး နှပ်နေပေတော့။ Online ယဉ်ကျေးမှု့က ကြီးထွားနေပြီ။ Online မှာစာရေးသားကြတဲ့ လူငယ် ၊ လူရွယ် ၊ လူကြီး ၊ တွေလည်း ထောင်းလမောင်းထ နေပြီ ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ ပြီးတော့… ပြောရရင် Online စာပေရေးသားတဲ့ လူငယ်တွေက ကိုယ့် စာမျက်နှာမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရေးကြတာ။ ဘယ်သူနေရာပေးလို့မှ စာရေးရတာမဟုတ်သလို ၊ စာစီသမားတွေ ၊ Layout သမား တွေ ပေးတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်စာမျက်နှာကို ထားရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။
အွန်လိုင်းမှာ စာရေးနေကြတာ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့ လူငယ်တွေက နိုင်ငံခြားမှာ တစ်ချို့လူငယ်တွေက ၊ နယ်မှာ၊ တစ်ချို့က စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပမ်းနေကြရတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့် အွန်လိုင်းမှာ စာရေးနေကြရတာဖြစ်တယ်။ Printed Media မှာရေးဖို့အတွက် အချိန်မပေးနိုင်လို့သာ အွန်လိုင်းမှာရေးနေကြရတာ ဖြစ်ပေမယ့် Printed Media ကို မယှဉ်နိုင်လို့/ ၀င်မတိုးရဲလို့ တော့မဟုတ်ဘူး။ အွန်လိုင်း ဘလောဂ့် တွေကနေ Printed Media ကိုရောက်သွားကြတဲ့ စာရေးတဲ့ လူငယ်တွေ မနည်းတော့ဘူး။ ဒါကိုလည်း သိဖို့ကောင်းပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူမသိသူမသိ ဖြစ်နေရပေမယ့်။ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ဖတ်နေရတဲ့ လူငယ်စာရေးသူတွေ အများအပြား အွန်လိုင်းလောကမှာရှိတယ်။ ဟာသလား ၊ ၀ထ္ထုတိုလား ၊ ၀ထ္ထုရှည်လား ၊ ကဗျာလား၊ ဆောင်းပါးလား ၊ နည်းပညာလား ၊ အွန်လိုင်းမှာရေးတဲ့ လူငယ် စာရေးသူတွေရဲ့ လက်ကို သိချင်ရင် အွန်လိုင်းမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ အခမဲ့ အီးဘုတ်တွေ ကို ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီဇိုင်းသမားလည်း တစ်ယောက်တည်း ၊ Layout သမားလည်း တစ်ယောက်တည်း ၊ စာမူစုဆောင်းသူလည်း တစ်ယောက်တည်း၊ အယ်ဒီတာလည်း တစ်ယောက်တည်း။ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကဗျာပုဒ်ရေ ၊ အက်ဆေးပုဒ်ရေ လေးငါးဆယ်ကို ထုတ်ဝေတဲ့ အီးဘုတ်တစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကဗျာတစ်ခုတည်းရေးပြီး မာန်တက်နေတဲ့ ပုံစံတွေ အွန်လိုင်းမှာမရှိဘူး။
အယ်ဒီတာ့ စားပွဲပေါ်ဖြတ်မှ ဖြတ်သန်းမှု့ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေက သိုးသွားပြီ။ ဖြတ်သန်းမှု့ဆိုတာ လူတိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ စက္ကူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရေးတဲ့ လူတွေ မှာလည်း ဖြတ်သန်းမှု့ရှိသလို Online စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ရေးတဲ့ လူတွေလည်း ဖြတ်သန်းမှု့ဆိုတာရှိတယ်။ အနုပညာဝမ်းစာဆိုတာကို ဘာနဲ့ တိုင်းတာသလဲ၊ နိုင်ငံခြား ကဗျာတွေ များများ ဖတ်ဖူးတာကိုပြောတာလား၊ အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာတွေ နာမည်ကို တန်းစီ ရွတ်ပြနိုင်တာလား။ နိုင်ငံရပ်ခြား ကဗျာတွေရဲ့ Ism တွေကို အလွတ်ရွတ်ပြနိုင်တာလား။ နည်းနည်းတော့ သိချင်တယ်။ Magazine တွေမှာ ပါနိုင်တဲ့ စာမူတွေ မရေးနိုင်လို့ ဘလောဂ့် မှာ ရေးနေကြတဲ့ လူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ သိစေချင်တယ်။ လူတွေမှာ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ရှိတယ်။ ၀ါသနာနဲ့ ၀မ်းရေးဆိုတာရှိတယ်။ ၀ါသနာပါတာနဲ့ အဆင်းရဲအစုတ်ပြတ်ခံပြီး လုပ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ သိပ်အလုပ်မဟုတ်သေးဘူး။
ကဗျာရေးရင် စုတ်ပြတ်သတ်နေရမယ်။ မုတ်ဆိတ်ထားရမယ်။ ကချင်လွယ်အိတ်လွယ်ရမယ်။ လေထန်ကုန်းမှာ ထိုင်ဖူးရမယ်။ စာပေသမားတွေနဲ့ သိရမယ်…အဲ့ဒီလို အသိုးတွေကို ထားခဲ့လိုက်တော့…။ စာရေးဆရာဖြစ် လို့ ဆင်းရဲစုတ်ပြတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို စာထဲထည့်ထည့်ရေးတာတွေ နှောင်းအတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ စာရေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်ချိန် ဘယ်နေရာ ဘယ်ကာလ ဘယ်အခြေအနေမှာမဆို စာရေးလို့ရတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်အတွက်ကတော့ အယ်ဒီတာစားပွဲပေါ်ကနေ ဖြတ်သန်းပြီး မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ စာမျက်နှာပေါ်လည်း ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်လေ ဘ၀ကိုယ်စီ အလုပ်ကိုယ်စီ နဲ့ နေတာ စာပေ အလုပ်နဲ့ ဘ၀ကိုကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယ့် ၀ါသနာပါတာတွေကို Online ဘလောဂ့် တွေမှာ ရေးနေခဲ့တာ…။ ဒီအတွက် ၀မ်းနည်းမနေဘူး။ ငါ့နာမည် စာမျက်နှာပေါ်မရောက်ရလေခြင်းဆိုပြီး ခံစားမနေဘူး။ ကိုယ်က သူဌေးသား ဆိုရင်တော့ လေထန်ကုန်းမှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး၊ စာပေလောကကို ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ဖို့ကလွယ်တယ်။ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက စာရေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါက ဒုတိယ ၀ါသနာဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်မကျောင်းပဲ ကဗျာမှကဗျာဆိုပြီး လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစုနဲ့ ၀မ်းရေးနဲ့ ။ အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့် သတ္တိမရှိဘူးလားမေးရင် သတ္တိမရှိဘူးလို့ ရဲရဲ ဖြေလိုက်မယ်…။ ဘ၀အတွက် အလုပ်ကလုပ်ရသေးတယ်။ နောက်ဆုံး ကဗျာရေးဖို့ စာရွက်ဝယ်ဖို့အတွက်ကို A4 စာရွက် ၀ယ်ရသေးတယ်။ စာရေးဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ ရအောင်လို့ ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာနေကြရတာ။ မိဘပိုက်ဆံ လက်ဖြန့်တောင်းပြီး ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားပြီး ကဗျာရေးရင်တော့ ရတယ်…။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တို့က ရှက်တတ်တယ်။
Online စာပေရေးသားမှု နဲ့ Online မှာ စာပေရေးသားတဲ့ လူငယ်တွေကို ဝေဖန်ချင်တယ်ဆိုရင် Online စာပေ ရေးသားမှု့ ရဲ့ သမိုင်းတွေ ဖြတ်သန်းမှု့တွေကို သေချာ လေ့လာကြည့်ဖို့တော့ ကောင်းတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမှာ ၊ ဘလောဂ့် စာမျက်နှာ မှာတင်မက လူငယ်တွေ Online မှာ စာပေလှုပ်ရှားမှု့ ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဆိုတာကိုပါ လေ့လာထားလိုက်ပါ။ အခုတော့ ဟန်ရေးပြ ပြီး ဖုန်းပြောပေမယ့် ဖုန်းခွက် ပြောင်းပြန်ကိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒီစာကိုလည်း လူတိုင်းနားလည်နိုင်မယ့် စာ/စကားနဲ့သာ ရေးခဲ့သလို ကျွန်တော့်ရဲ့ စာရေးတဲ့ နာမည် ကျော်ညိုသွေး နဲ့ ပဲ ရေးခဲ့ပါတယ်။ သတ္တိရှိရှိပေါ့။ ၀ါးလုံးခေါင်းထဲက လသာတယ်ဆိုတာ သူရဲကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယူဆတယ်။ လက်ဖျောက်ကျယ်ကျယ် မတီးတတ်ပဲနဲ့ ခွေးခေါ်လို့မရသလို ၊ တက်, ကျယ်ကျယ် မခေါက်နိုင်ပဲ နဲ့ ခွေးမောင်းလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်ကလောင် ကိုတောင် ကိုယ်မဖော်ရဲမှတော့ စာရေးမနေနဲ့တော့။ ငတက်ပြားပဲ လုပ်စားတာကောင်းပါတယ်။ Online မှာ စာရေးနေကြတဲ့ လူငယ်တွေကို ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ရေးလိုက်တဲ့ ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါး တစ်ခုကြောင့် အွန်လိုင်းမှာ စာရေးတဲ့ လူငယ်တွေ လက်ပျက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ စာရေးဆရာ ၊ ကဗျာဆရာတွေကို လူတိုင်းက ဆရာ ..ဆရာ နဲ့ တလေး တစားလုပ်တဲ့ အပေါ် တော့ မသာယာမိပါစေနဲ့။ ပြီးတော့ စာရေးဆရာတွေဆိုတာ အမှန်တရားကို လက်ခံရတယ်…
Online မှာ စာရေးနေတဲ့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်စား တစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်…
အနုပညာအရည်အသွေးမှန်ကန်ဖို့ပဲ၊ အနုပညာစစ်ရင် နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ ခေတ်ကာလမရွေး အနုပညာဟာ အနုပညာပဲ ဖြစ်မယ် အနုပညာတစ်ရပ်ရဲ့ စံနှုန်းကို Paper စံတစ်ခုတည်းနဲ့ မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး၊ Paper ပေါ်တက်နေတာနဲ့ မတက်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ Paper ပေါ်တက်နိုင်မှ အနုပညာစစ်မယ်လို့ မယူဆဘူး။ အနုပညာဆိုတာ ခံစားချက်ကို ပေးနိုင်သူနဲ့ လက်ခံနိုင်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပေးမယူမျှတမှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ အနုပညာဆိုတာကို စက္ကူပေါ်တင်လိုက်မှ ရသဆိုတာ ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူး။ ဖန်တီး ပုံဖော် လိုက်ကတည်းက ကို ခံစားချက်ကြောင့် ရသဆိုတာ တစ်ခါတည်း ပါလာပြီးသား။
(ဇန်န၀ါရီလထုတ်၊ ပန်းအလင်္ကာမဂဇင်းပါ ကဗျာသမားတစ်ဦး၏ ယနေ့ကဗျာနှင့် ကဗျာအရှုပ်တော်ပုံဆောင်းပါးသို့…………)
← ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ထွင် ခဲ့တဲ့လူ့ငရဲပဲ သီရိမာ
ခွေးရုပ်ရှင် (ခေတ်သစ်ရုပ်ပြသရော်စာ) →
2 comments on “မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီးအော်သလား”
Thor on April 28, 2011 at 5:39 am said:
tee on February 10, 2011 at 5:03 am said:
very neutral and true on the basic of today’s circumstance. From my personal point of view, the definition of art, including poems and novels, should be expanded instead of their rigid principle and narrow vision so that our Burmese will progress more and hasalot of variety. I prefer ‘River’ to ‘some stink pound’. Anyhow, I like ur post.